सीताफल स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी – Khabar Silo
सीताफल स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी
Posted on September 26, 2019 Author admin Comment(0)
तराईका जिल्लामा पाइने यस फललाई कतै सीताफल, कतै आटी फल त कतै शरीफाका नामले चिनिन्छ । खाँदा स्वादिलो यो फल मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी हुन्छ ।सीताफल मानिसहरुले खाने भएपनि यसको फाइदाबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ । सीताफलका फाइदा बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।सिताफलमा पाइने भिटामिन तथा खनिज पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिरोधात्मक क्षमाताको विकास गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसले हृदयघात र क्यान्सर जस्ता ठूलो रोगहरुसँग लड्ने क्षमाताको विकास गर्ने काम गर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
यसलाई नियमित खाँदा रक्तचाप नियन्त्रणमा गर्छ । आँखा तलको कालोपनलाई चम्किलो बनाउने काम गर्छ । यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने तामा तथा फलाम प्राकृतिक रुपमा पूरा गर्ने काम गर्छ । यसमा म्याग्नेसियम पनि धेरै मात्रामा पाइन्छ ।
म्याग्नेसियमले हाम्रो शरीरमा रहेको पानीको मात्रामा सन्तुलन ल्याउने काम गर्छ । यसले शरीरको जोर्नीहरुको दुखाइमा कमी ल्याउने काम गर्दछ ।यसले झाडापखाला लागेको बेलामा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यसको पात र बोक्रालाई पनिमा राखेर पांच मिनेट सम्म उमालेर सेवन गर्यो भने पेटमा पर्ने जुका नियन्त्रण हुने बताइन्छ । यसमा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट तत्वले गर्दा रक्तचापका बिरामीलाई निकै मद्यत पुर्‍याउँछ ।
यी ५ चीज, जसले सजिलै मोटोपन घटाएर बनाउँछ शरीरलाई स्लिम
Posted on December 21, 2020 Author khabar silo
काठमाडौँ । मोटोपनका कारण तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस्, घरभित्रै यसको औषधी पाइन्छ। मोटोपनलाई कम गर्नका लागि भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने वस्तुहरू नै लाभदायक हुन्छन्। दालचिनीः आयुर्वेदमा दालचिनीको प्रयोग कीटाणुनाशक, दुखाइको कम गर्न प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी वजन कम गर्नको लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसमा भएको तत्वले मेटाबोलिज्मलाई बढाउँछ भने ब्लड शुगर, […]
कपालमा मेहन्दी लगाउँदा यी गल्ती त गर्नु भएको छैन ? यो हो सही तरिका
Posted on April 11, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । हरेक मानिसमा आफु राम्रो र सुन्दर देखिने चाहाना हुन्छ। त्यसैले मानिस बिभिन्न सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने र सुन्दरतामा ध्यान दिने गर्दछन्।तर कतिपय अवस्थामा सही ज्ञान नहुदाँ मेकअप सामग्री कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी हुदैन । यस्तोमा ती सामग्रीको गलतप्रयोग भएमा सौन्दर्यता बिग्रने खतरा हुन्छ। आज हामी कसरी सही तरिकाले कसरी मेहेन्दी लगाउने भन्ने […]
Posted on August 14, 2020 Author khabar silo
तुलसीका पात औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । मान्छेले तुलसीका पात चियामा हालेर पनि खाने गर्छन् । यसका फाइदा धेरै छन् । चिसो लागेका बेला यसको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । अझ दूध र तुलसीका पात मिसाएर उमालेर खाँदा यसले फाइदा पुर्‍याउँछ । यति मात्र होइन, तुलसी र दूध खाँदा शर्दीबाहेक अन्य रोगबाट पनि जोगिन […]
गणेश लामा बन्ने भए काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य
स्पेनका लागि नेपाली राजदूतमा दावा फुटी शेर्पा नियुक्त
घरमालिक अस्पताल भर्ना हुँदा ४ दिन सम्म ढोकामा कुरेर बस्यो कुकुर, घरघरी चिहाएर ढोकावाट मालिकलाई हेरेको देखिन्यो (भिडियो हेर्नुस्)
काभ्रेमा एकै दिन ६ संक्रमितको नि’धन
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, बैशाख २२ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
जब एक चोर सलमान खानको घरभित्र चोरी गर्न पस्यो त्यसपछि……. खाट मुनिबाटै फिल्म हेर्न थाल्यो(भिडियो हेर्नुहोस्)